Wednesday,5Jun, 2019 8:45 AM
नाम सन्तोष, प्रेममा असन्तोष । झापाबाट स्नातक उत्तीर्ण । स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि राजधानी छिरे । बालाजु बसेर बिहान क्याम्पस पढ्छन् । अंग्रेजी शिक्षकका रूपमा बालाजुको एक स्कुलमा पढाइरहेका छन् । क्याम्पस छुट्टी हुनासाथ स्कुलतिर दगुरिहाल्छन् । समयको सिक्रीले यसरी बाँधिएका छन् कि कसैसँग गफ गर्ने एक सेकेण्ड समय छैन । होचो कद । चुलबुले र गफाडी । क्याम्पसको ‘ब्रेक टाइम’मा सुष्मिता पौडेलसँग दह्रो जुहारी पर्छ । अंग्रेजी बोलेर सबैलाई दिक्क पार्छन् ।
कसैसित प्रेम देखाउने र गर्ने स्वभाव अनेक हुँदारहेछन् । स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि आर आर मा आएपछि उनको प्रेम सुमिसँग झाँगियो । तर, १५ दिन पनि टिक्न सकेन । सन्तोष केटी भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । बाटोमा हिँड्दै गरेकी कोही राम्री तरुनी देख्यो कि नजिक हुन खोज्ने । कक्षामा सबै केटीलाई आफ्नो बनाउन खोज्ने । कसैलाई आफ्नो बनाउन त केही सरप्राइज्ड दिनुपर्छ र गुमाउनुपर्छ । तर, सन्तोषको मनोभाव अचम्म खालको छ । कोही केटी बोल्यो कि यही सोच्ने कि उनले मलाई मन पराइन् । सन्तोष कलेजका केटीहरूसँग पनि यही मानसिकतासाथ नजिक हुन खोज्छन् । सबै केटी कहाँ उस्तै हुन्छन्, केही दिनअघि अरुणी उप्रेतीसँग त्यस्तै खालको आकांक्षा देखाएपछि गाली भेट्टाए । अरुणीले भनिदिइन्, ‘तिमी बोल्न मन छ भने बोल नत्र यस्तो वाहियात कुरा मसँग नगर । साथी भएर साथीजस्तो गफ गर्न सिक, त्योभन्दा माथि होइन ।’ तर, नानीदेखि लागेको बानी कहाँ छाड्नु । अहिले पनि त्यस्तै छन् । शनिबार साथीहरूसँग गोदावरी घुम्न गएका रहेछन् । त्यहाँ स्नातकोत्तर अध्ययनरत ‘बी’ र ‘सी’ समूहका साथीहरू संलग्न थिए । केटाभन्दा केटीकै बाहुल्यता । सन्तोषसँग निरज, सन्देश, अभिषेकहरू थिए । सन्तोष र निरज एकै समूहका विद्यार्थी हुन् भने उषा समूह ‘बी’ की । निरज र उषा आर आरमा स्नातक सँगै पढेका । त्यसैले उनीहरूको दोस्ती राम्रो छ । तर, गोदावरीको हरियाली हेर्नुपर्ने बेला सन्तोषले उषाको रुपमा अल्मलिए । त्यसपछि निरजलाई उषा आफूलाई मिलाइदिन किचकिच गर्न थाले ।
निरजले उषाको ब्वाइफ्रेन्ड भएको कुरा सुनाएपछि केही मत्थर भए । तैपनि उनीसँग नजिकिन अनेक उपाय भने खोजिइरहे । यसरी गोदावरीको त्यो शनिबारे घुमघाम सामान्यमै बित्यो, सन्तोषले सोचेको भन्दा । रेस्लिङका सोखिन उनको मोबाइलमा रेस्लिङभन्दा अन्य कुनै गेम हुँदैन । रेस्लर रोमन रेन्जका फ्यान उनले आफ्नो फेसबुकको फ्रोफाइल पनि रोमनकै राखेका छन् भने मोबाइलको वालपेपर पनि । क्याम्पसमा पनि उनी साथीहरूलाई रेस्लिङ देखाउँछन् । केहीले उनको भिडियो हेरिदिन्छन् त कसैले मनै लगाइदिँदैनन् । सन्तोषको ताल आफ्नै खालको छ । गोदावरीबाट फर्किएको भोलिपल्ट १९ गते आइतबार गर्मी बिदा हुनुपूर्व सन्तोष ‘सी’ समूहकी प्रतिक्षासँग पनि त्यस्तै हिसाबले नजिकिन खोजेछन् । शुरुमा त उनले सन्तोषलाई सामान्य कलेजको साथीजस्तै ठानेर गफिइन् । दुईबीचमा गर्मी बिदाको सदुपयोग कसरी गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षाको तयारी कहिले पूरा गर्ने ? भन्ने प्रसंग चल्दै थियो । र, गफ पनि सुन्न लायक थियो । तर, यत्तिकैमा सन्तोषले कुराकानीलाई मोडे । आफूलाई स्कुलमा पढाउन जान ढिला भएको भन्दै मोबाइल नम्बर मागे । उनले साथी सम्झेर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिइन् । त्यसपछि सन्तोषले आफ्नो बाटो तताए ।
बेलुकी स्कुलबाट कोठा पुगेर फोन लगाएर जुन कुुरा भोलिपल्ट निरजलाई सुनाए । अब प्रतिक्षालाई पट्याउँछु भन्ने मानसिकताले फोन गरे । दुई पटक फोन गर्दा पनि नउठेपछि खानपिनतिर लागे । खाना पकाएर खाइवरी पनि कलब्याक नभएपछि फेरि कल गरे । यसपटक भने प्रतिक्षाले फोन उठाइन् । साइलेन्टमा रहेकाले रिसिभ गर्न नसकेको भन्दै सरी मागिन् । त्यो दिन दुईबीचमा सामान्य हाइहेल्लो भएर कुराकानी टुंगियो । सोमबार बेलुकी पनि उसैगरी खानुपूर्व फोन गरे । यसपटक भने अघिल्लोचोटिझैँ ढिला नगरी फोन उठाइन् । गफगाफ चल्न थाल्यो । अघिल्लो पटकको भन्दा यसपटक सन्तोषले कुराकानीलाई नयाँधारतिर लगे । कुराकानीलाई प्रेमतिर मोडेपछि प्रतिक्षा आगो भइन् । सन्तोषलाई ‘तँ तँ र म म’ गर्दै हकरिन् । त्यसपछि सन्तोषको फोन कट्यो । अब आइन्दा आफूसँग यस्तो कुरा नगर्न भन्दै म्यासेजमार्फत ‘मेरो श्रीमान् हुनुहुन्छ । उहाँले यो कुरा सुन्नुभएको भए ? साथी भएर साथी बन्न सिक’, भनिदिइन् । त्यो म्यासेज पढेपछि सन्तोष छट्पटाए । रातभरि अनिदो बसे । र, तत्काल निरजलाई फोन गरेर भएभरको व्यहोरा सुनाए ।
निरजलाई प्रतिक्षाले कक्षाका साथीहरूलाई त्यो कुरा सुनाइन् भने बर्बाद हुन्छ भन्दै दुःखेसो पोखे । ‘तिम्रो सबै कुरा ठीक छ । तर, जोसुकै केटी देख्नेबित्तिकै आँखा नदेख्ने बानी खराब छ’ भन्दै निरजले गाली गरे । निरजले प्रतिक्षा विवाहित र पाँच वर्षको छोरा पनि रहेको सुनाएपछि सन्तोष छाँगाबाट खसेजस्तो भए । निरजले पनि मौकाको बेला सन्तोषलाई भनिदिएछ, ‘प्रतिक्षाले चाहिन् भने हेर सन्तोष तिमीलाई जे पनि गरिदिन सक्छिन् । उनका श्रीमान् खतरा छन् । धनाढ्य परिवारका हुन् । व्यापारीसमेत हुन् ।’ निरजले यति के मात्र भनेका थिए सन्तोषले फोन गरेर सरी मागिदिन आग्रह गरे । त्यसपछि निरजले झन् झपारे, ‘तिमी स्कुलको शिक्षकसमेत हौँ । स्कुलमा तिम्रा केटी विद्यार्थी पनि होलान् । उनीहरूलाई पनि यस्तै नजरले हेर्छाै ?’ त्यसपछि सन्तोष फोनमा चुइँक्क बोल्न सकेनन् । अबआइन्दा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने बाचाका साथ प्रतिक्षासँग माफी मागिदिन आग्रह गरेका छन् । गर्मी बिदापछि प्रतिक्षासँग भेट हुँदा सन्तोषले कुन अनुहारले बोलाउँछन् हेर्न बाँकी छ ।
– उही सन्तोषको साथी भरत